भारतमाथि चीनको आक्रमण, पाकिस्तानले पनि साथ दियो ! «
भारतमाथि चीनको आक्रमण, पाकिस्तानले पनि साथ दियो !
प्रकाशित मिति : ५ आश्विन २०७५, शुक्रबार ०८:१५
बेइजिङ । भारतले पाकिस्तानलाई शान्ति र अमनचयन मन नपराउँने देशको रुपमा चित्रित गर्ने गरेको छ । भारत यो कुरामा विश्वास गर्दछ कि पाकिस्तानको सम्बन्ध छिमेकी देशहरुसँग धेरै राम्रो छैन । अहिले चीनका राष्ट्रपति सि जिन पिङको एक बयानले भारत झस्केको छ ।
उनले पाकिस्तानसँग सम्बन्ध बलियो भएको बताएका छन । उनले विश्वास व्यक्त गरे कि सिल्क रोड जस्तो महत्वपूर्ण आर्थिक परियोजना सफल हुनेछ। केही दिन पहिले पाकिस्तानका सेना प्रमुख जनरल कमर जावेज बागावा चीनको भ्रमणमा गएका थिए । राष्ट्रपति सिले यस परियोजनाको सफलताबारे पाकिस्तानी सेना प्रमुखलाई आश्वासन दिए। चीनमा पाकिस्तानका सेनापतिलाई केही हप्ताअघि दिईएको उच्च सम्मान ।
पाकिस्तानमा प्रधानमन्त्री इमरान खानको नयाँ सरकारको कार्यालय ग्रहण गरेपछि बागवा चीन भ्रमण गर्ने पहिलो वरिष्ठ पाकिस्तानी प्रतिनिधि हुन्। हालैका वर्षहरूमा, पाकिस्तानले चीनसँगको सम्बन्धलाई बलियो स्वरुप दिएको छ किनभने संयुक्त राज्यसँगको सम्बन्ध पाकिस्तानसँग राम्रो छैन । बागवासँगको एक बैठकमा सिले पाकिस्तान र चीनलाई दुई गहिरो मित्र भएको बताए।
राष्ट्रपति सिले भने, “चीन र पाकिस्तान बिचको सम्बन्ध सधैं बलियो रहनेछ।” उनले वान बेल्ट वान रोड परियोजना को अलावा,पाकिस्तान को सुरक्षा को प्रशंसा गरे र चीन र पाकिस्तान आर्थिक कर्जा को निर्माण को लागि समर्थन गरे। एजेन्सी